Vaovao - Inona no atao hoe Zirconia Block?
Araka ny fantatsika rehetra, misy karazana fitaovana telo ampiasaina amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny nify: fitaovana zirconia block sy fitaovana vy. Zirconium oxide dia miseho amin'ny endrika kristaly monoclinika, tetragonal ary cubic. Ny ampahany voadio tanteraka dia azo amboarina toy ny endrika kristaly toratelo sy / na tetragonaly. Mba hampiorenana ireo rafitra kristaly ireo dia mila ampiana stabilizers toy ny magnesium oxide (MgO) na yttrium oxide (Y2O3) ao amin'ny ZrO2.
Maninona ny zirconia block no vokatra mety indrindra amin'ny nify famerenana?
Andao hiresaka formation zirconia. Ny sakana zirconia nify dia vita amin'ny endrika oksida kristaly zirconium, ary misy atôma metaly ao anaty kristaly fa tsy heverina ho metaly mihitsy. Noho ny toetrany maharitra sy biocompatible, ny mpandidy na ny dokotera dia mampiasa sakana zirconia nify amin'ny prostheses isan-karazany. Na izy io dia ampiasaina amin'ny implants satria heverina ho fitaovana matanjaka indrindra.
Na dia vokatra marobe aza no ampiasaina amin'ny sehatry ny nify, ny andiana zirconia nify antsoina koa hoe ceramic block dia malaza indrindra amin'ireo mpitsabo nify sy marary.
Tombony sasany ho an'ny sakana zirconia nify:
- Satria amboarina amin'ny alàlan'ny fivoaran'ny teknolojia avo lenta. Miaraka amin'ny hamafin'ny vaky avo, fanitarana hafanana mitovy amin'ny vy vy, tanjaka ambony miondrika ary tanjaka mahery, fanoherana avo ny fitafiana sy ny harafesina, fitondra hafanana ambany
- Ary ankatoavin'ny masoivohom-pirenena. Ary koa, ireto sakana ireto dia nandalo fitsapana fahadiovana, hahazoana antoka fa azo antoka tanteraka ny fampiasana azy.
–Ny bloc zirconia nify dia vokatra avo lenta, ary koa mahatonga ny nify haharitra kokoa sy voajanahary.
–Raha apetraka ao anatin'ny marary ny vokatra dia hanome fiainana talantalana tsara amin'ilay vokatra.
–Ny tombontsoa lehibe hafa aterak'ity zirconia nify ity dia ny fampihenana ny fotoana mialoha ny fanamainana sy ny fanatsarana ny fijerin'ny maso mandritra ny fotoana fandokoana.
–Ny fiasa manandanja indrindra amin'ity vokatra ity dia ny fananana fisehoana loko voajanahary, ary koa afaka mifanaraka amin'ny habe sy endrika rehetra.
Fotoana fandefasana: Jul-17-2021